३९ मिनेट अघि उज्यालो अनलाईन
‘यो वर्ष त पाल्छु, अर्को वर्ष थाहा छैन’
पोखरा । लेकसाइडमा यतिबेला विदेशी पर्यटक छैनन् । लडाउनले यतै रोकिएकाहरुलाई पनि अन्र्तराष्ट्रिय उडान खोल्ने बित्तिकै जानुपर्ने छ । जानै नपरे पनि के गरुन् ! खर्च सकिएर बेखर्चि जो बनेका छन् । लक्ष्मण गौतम घरि खल्तिबाट मोबाइल झिक्छन् । एकै...
महिना दिनभर तपाईँले औसतमा कति मूल्य बराबरको विद्युत् उपभोग गर्नुहुन्छ? त्यसको लेखाजोखा तपाई आफैँले गर्न सक्नुहुने भएको छ। तपाईँलाई धेरै विद्युत् खपत हुन्छ भन्ने लागेको खण्डमा बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ, कम खपत गर्छु भन्ने लागेको छ भने कम महसुल तिर्दा हुने...
काठमाडौं । आपोले नेपालमा पहिलोपटक अनलाइन लञ्चबाट सार्वजनिक गरेको ओपो एफ१५ले यसमा रहेको ४८एमपी अल्ट्रा वाइड एंगलमा क्रो क्वाड क्याम र सुपर स्लिक डिजाइनमार्फत प्रयोगकर्तालाई ब्यवसायिक फोटोग्राफी झैँ अनुभव प्रदान गरिरहेको छ । ओपो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबी ट्राओले...